Yenza Ikhefu Yakho Yompu Yompu
Nantsi iprojekthi ye-chemistry elula ongayenza apho uthabatha utywala olusicacileyo kwaye ngokukhawuleza ulomeleze ukuba 'kushushu'. Akunjalo ngamanzi eqhwa, nangona kunjalo. Le yindlela owenza ngayo iikristali ze-acetate ye-sodium, esetyenziselwa ukufudumala kwamandla kunye nokupaka kwamakhemikhali kunye namaphakethi ashushu.
Iimpawu zeHlabathi ezishisayo
acetate ye sodium
iglasi okanye i-pan
Ukwenza I-Acetate Yakho I-Acetate Monohydrate
Ukuba awunayo i-acetate ye-acetate monohydrates ungenza eyakho .
Yongeza i-baking soda (i-bicarbonate ye-sodium) kwiviniga (i-acid acetic acid) kuze kube yilapho umxube unqanda ukutshaya. Oku kuya kukunika isisombululo esinomsoco we-acetate ye-sodium. Ukuba ubilisa amanzi, uya kushiywa nge-acetate ye-sodium. Lindela ukusebenzisa i-soda eninzi kunye neviniga xa uhamba kule ndlela.
Yenza iHla eliHla
Yintoni oya kwenzayo yenza isisombululo se-acetate ye-sodium. Isisombululo siya kuhlala sihlaziye kwi-acetate ye-sodium. Oku kuya kubangela i-crystallization ngokukhawuleza eya kufana nebhokisi leqhwa, ngaphandle kokuba iya kushushu kwi-touch kwaye ingadli.
Lahla enye i-acetate ye-acetate monohydrates epanini.
Yongeza amanzi okwaneleyo ukuchitha i-acetate ye-sodium.
Ukushisa isisombululo nje ngezantsi kwendawo yayo yokubilisa.
Gxuma kwi-acetate engaphezulu. Qhubeka uvuselela kwaye wongeze i-acetate ye-sodium de uze uqale ukubona izinto eziqinileyo eziqokelelwa phantsi kwepen.
Dlulisa isisombululo eshushu kwisilayi okanye esinye isitya. Ungavumeli naluphi na oluqinileyo olungagqitywanga ukungena kwisitya.
Kulula isisombululo kwifriji 30 imizuzu ukuya kwiyure.
Susa isisombululo kwifriji. Nangona nje ungazange ushiye i-acetate eqinile ye-sodium kwisisombululo, kufuneka ihlale iselwandle.
Xa ulungele ukwenza 'iqhwa' livelise encinci ye-acetate eqinile ye-sodium. Unokudibanisa i-toothpick okanye umgca wesipuni kwi-sodium acetate powder.
I-crystallization iya kuguquka ukushisa ( ukuphendula ngokukrakra ), okwenza isinyameko sitshise kwi-touch (~ 130 ° F).
Ice Ice Trick
Akudingeki ukuba uqine i-acetate ye-sodium kwisitya. Unokuyifakraza nje ngokuba isisombululo sithululwa ukwenza izinto ezintle.
Iiprojekti zeSayensi zeNzululwazi eziQalayo
Indlela yokukhulisa i-Crystal Garden Garden
Ngaphambi kokuba uthenge i-Wakeboard
AmaFrentshi Amazwi nge Jour and Journeée
Yintoni i-Chaos Magic?
Ngaba Unokwenza I-Underwater Under While Scuba Diving?
Intetho yeSuteki ngesiJapan
I-VIP - Ekhoyo ngoku elula kwaye eqhubekayo
Indlela Eyona Ngcono Yokuba Ufundisise Iimviwo zezoQoqosho
Ukwazi Isihlahla SokuKhisimusi